Zvakanakira Linux pane nhare | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga isu tese tinoziva pano mabhenefiti ayo Linux inogadzira kune yedu komputa, ingave desktop kana laptop, ikozvino chii chinounzwa neLinux kunharembozha yedu? Pasi rese, Symbian inoramba ichinyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa mumidziyo iyi, zvine musoro, 1 pane yega nhatu nhare dzepasirese ndeye Nokia. Asi Linux iri kuisa musoro wayo mumusika uyu nekubudirira kwakawanda kupfuura nakare kose nekutenda zvakanyanya kune Android neMaemo.
Iwo mapuratifomu akasimba kwazvo eLinux emafoni anotsigirwa nemakambani maviri makuru munyika: Google yeAroid uye Nokia yeMaemo, nekuti ini handisi kuzopinda muOpenMoko, LiMo kana Qtopia. Nekudaro, pamusoro pekutsigirwa kwemakambani makuru, tichaenda kunoona zvimwe zvakanaka zvatinazvo neLinux parunhare, kunyanya kurwisa chikara chikuru chemusika, iyo iPhone.
1. Open sosi
Chero ani anoziva Linux achatoziva kuti musoro uyu ndewani. Asi zvakare ndezvekuti mumunda wenhare mbozha yakakosha kukosha kugona kugadzira nekumhanyisa chero application pane yedu terminal. Izvi hazviitike, semuenzaniso, neiyo iPhone (mukwikwidzi mukuru wevose). Sezvo iwe uchiganhurirwa kune izvo zvinoshandiswa neApple muApp Store yayo.
Imwe yemasimba eLinux. Mune nhare mbozhanhare unogona kufunga kuti haina kukosha asi zuva nezuva mafoni ari kuramba achiwedzera komputa uye nekudaro madhiragi anozonyanya kutsoropodza. Sezvakaita nemakomputa, zvekuchengetedza zvinowanzoitika uye nekukurumidza kuita paLinux pane paMac OS kana Windows, saka panguva ino Android ine mukana kupfuura iPhone OS kana Windows Mobile.
Apple ine zvakawanda zvekushandisa kupfuura chero munhu, asi pamwe imhaka yekuti ndivo vaive vekutanga kana nekuti fanboys akawanda, mune chero mamiriro ezvinhu, kuvandudzwa kweLinux chikuva kuri nyore sezvo zvaitwa pamitauro yakajairika (Java, C, nezvimwe. ). Nekudaro, iyo iPhone SDK inogona kuiswa chete paMac, zvirongwa paChinangwa C uye, pamusoro pezvo, kutumira chikumbiro chako kuti chiongororwe kuti uone kana chichigona kupinda muApp Store, unofanirwa kuzviita, zvisingaite, kubva kuMac. maqueros akakwana, kune vakasara vevanhu idambudziko uye, ngatizvitarisei, programmers vanowanzoshandisa Linux.
Pano zvinopfuura mukana weLinux, iko kukanganisa kweiyo iPhone. Nefoni ipi yaunogona kuchinjana ruzivo nekombuta yako, ingave iri PC kana Mac, nechiratidzo chakapfava chekukopa uye kunama. Nekudaro, iyo iPhone yakabatana neTunes, ndiyo chete nzira yekuteedzera zvinhu kubva nharembozha kuenda kune komputa uye zvinopesana. Kuremara kudiki kune avo vasina Mac kana vasingade kuve neTunes, iyo, sekuziva kwedu, inotora zvakawanda.
Panguva ino ndipo panosiyana musiyano uripo pakati pechinhu cheLinux uye chero chimwe chinhu, kunyanya iPhone. Mune Apple foni zvese zviri seizvo Apple inoda, mamenyu, bhurawuza ... Zvisinei, pafoni yeLinux unogona kuisa chero chinhu. Mabhurawuza, mamaneja eemail, iwe unogona kunyange kushandura aesthetics yefoni 100% uye, kana uchida, uve nemenu imwechete se iPhone. Mikana yacho haiperi.
Muchidimbu, pasina kupinda mukuongorora zvinhu zvehardware, usability, dhizaini uye izvo zvinhu zviri kunze kwesisitimu inoshanda, Linux ine mikana yakawanda kupfuura iPhone OS uye, zveshuwa, Symbian, Windows Mobile, nezvimwe. Muchokwadi, muJapan neChina vanofukidza 40% yemusika wekufambisa. Asi izvi ndozvinoitika pamakomputa, Linux inogona kuve nemabhenefiti akakurisa pamusoro pevakwikwidzi vayo veWindows neMac OS iyo isina rutsigiro rwakasimba hapana chinozadzikiswa. Musiyano ndewekuti pano zvinoita. Tichaona zvinoitika kana izvi zvapararira mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Izvo zvakanakira Linux pane nhare
Ini ndinofunga ndicho chinhu chimwe chete icho chinoitika kwatiri paPC: neWindows zvese zvakavharwa mubhokisi rayo, neLinux zvese zvakavhurirwa Nharaunda.
Iye zvino taenda kune nharembozha: iPhone, cerradito. Linux, yakavhurika nekuwanika kune zvisingaperi shanduko ...
Nenzira, yakanaka kwazvo yekupinda.
Ndatenda :) Uye hongu, ndizvo chaizvo zvazviri, zvakafanana nemakomputa asi pane nhare
Ndinovimba kuti yako posvo ichaverengerwa nevazhinji, uye kana zvichibvira, ndinovimba ichaverengerwa neiyo fan fan, kuti ivo vaone kuti Linux iri nani pane MacOS X.
Pindura kuna LeeK
Ini ndinobvumirana nekuchinjika kunogona kupihwa neLinux uye kuti yakavharwa zvakadii iyo iPhone iri, asi ini ndinofunga kuti, zvakanyanya kudemba kwangu, kubudirira kweiyo iPhone ndizvo chaizvo izvi. Iko hakuna mafomu (kana mashoma kwazvo) ayo anorembera iyo iPhone, hapana mavhairasi kana malware, nhare haina "kuneta" kana mwedzi yapfuura mushure mekuisa / kubvisa mapurogiramu nemitambo uye yakareba etcetera.
Ehezve, izvi zvese pamutengo werusununguko, nekuti nekuti haugone, haugone kana kuchinja bhatiri rei iphone / kubata (kunyangwe paine runyerekupe rwekuti mu4G zvinoita).
Tiri mubhizinesi senguva dzose, mushandisi ane iPhone achataura kune mumwe uye ivo vanonzwisisana zvakakwana, sezvinoitika neMacOSX kana Windows paPC's. MuLinux, mushandisi weArch haaite zvinhu zvakafanana kuisa nekuchengetedza iyo system seye debianite kana susero, pasina kupinda mune chokwadi chekuti mumwe anogona kuve neGnome, imwe KDE uye imwe Openbox.
Ndanga ndiri mushandisi weiyo Unix masisitimu kwenguva yakareba, asi rusununguko rwandinofarira mumasisitimu angu handikwanise kuendesa nekugovana.
Kune vanogadzira zvimwe zvakafanana, vamwe vanonyora kunyorera ne .NET, vamwe vane Chinangwa, asi zvakadii neLinux? GTK kana QT?
Izvo chaizvo zvese kupokana. Iyo AppStore ine yakanaka yakanaka mashoma ekushandisa maficha, asi kune zvakare zvakawanda zvichemo kubva kune vanogadzira avo vanorambidza zvirongwa zvavo. Uye kune maficha anopa mashoma marwadzo uye akaverengerwa.
Asi chinhu chakadai, kazhinji vanhu vanogutsikana ne iphone / kubata uye neapurosi yavo, iyo muchidimbu haisi chimwe chinhu kunze kweiyo unix repository asi inodzorwa / inotarisirwa.
Windows mobile nhasi yapera nguva, uye nerombo rakanaka isu tine vabiki veROMS vanovandudza iyo system zvakanyanya (dai vasiri ivo, yangu HTC Diamond yaizonyadzisa neiyo yeVodafone ROM yepamutemo. Uye Android ndinoiona iri pakati pevaviri. Kune vabiki veROMS dzeApple asi hapana ROM inokurumidza seyepamutemo. Chitoro chako chichafanana neApple.
Mune chero system, kana ndine repository (kana chitoro mune zvinoitika zvema mobiles), kutonga kunodiwa.
Zvisinei, ingangoita 5 mangwanani, handizive kana iwe wakanzwisisa kwandaida kuenda ;-)
Josep, uri kutaura chokwadi kana zvasvika kumakomputa, asi nenharembozha zvichave zvakasiyana zvakanyanya sezvo paine chaizvo chete yakasimba Linux, Android, uye imwe inoda kuve, Maemo. Uye zvakare, iko kushomeka kwe mobile hakugone kufananidzwa neiyo yePC.
Kune rimwe divi, iwe unotaura nezve kugadzikana kweiyo iPhone uye ini, ndine hurombo, ndinofanira kuzvibvunza. Ndatarisa nemaoko angu pachangu kuti yakaturikwa sei uye hapana chaungaite sezvo iwe usingakwanise kubvisa bhatiri kuti ritangezve. Pane nguva dzekushungurudzika, uye zvakatonyanya kufunga kuti, zvinofungidzirwa, zvese zvinoshandiswa zvinowedzeredzwa zvakakwana neApple kuti zvisakuvadza iyo terminal. Chinhu chinobatsira kudzivirira izvi kuti zviitike kusakwanisika kwekushandisa zvinopfuura kamwechete panguva imwe chete.
Pakupera kwezuva, kuri kudzikisira rusununguko uye mashandiro mukutsinhana kugadzikana uko, pamusoro pezvose, vasingakwanise kuzadzisa. Hongu, ndicho chiratidzo pamusika, asi haisi mushonga, kure nazvo. Kune avo vanoda zvese, iyo iPhone idiki kwazvo. Haisi komputa yakabata ruoko sezvaunoedza kuita nemaseji ekumusoro-soro.
Mhoroi, ini ndiri mutsva ku linux, ndine motorola zn5 ine montavista linux operating system uye ndinoda kuziva kana uchigona kuisa windows nhare pairi. Ndatenda zvikuru pamberi, ndinomirira mhinduro
Pasi rese, Symbian inoramba ichinyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa mumidziyo iyi, zvine musoro, 1 pane yega nhatu nhare dzepasirese ndeye Nokia. Asi Linux iri kuisa musoro wayo mumusika uyu nekubudirira kwakawanda kupfuura nakare kose nekutenda zvakanyanya kune Android neMaemo.
KUNI IZVI NDINOTI… HA!
Inguva yakareba sei maNokias anga aine system yako pamusika? Kana iwe ukavaenzanisa ivo zvakaenzana, nzvimbo yenguva / nharembozha, iwe waizoona kuti kune akawanda mafoni ane android kupfuura nokias
Ini handizive iyo inonzi windows, kana iwe uchida ini ndinogona kukubatsira iwe kuisa linux uye manejimendi ayo.